एनआरएनएलाई नेपालको विकास साझेदार बनाउने नेतृत्व आवश्यक छ - Karobar National Economic Daily
एनआरएनएलाई नेपालको विकास साझेदार बनाउने नेतृत्व आवश्यक छ
query_builderSeptember 12, 2017 7:49 PM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility1774
रन्जु वाग्ले, प्रवक्ता, एनआरएनए
एनआरएन अभियानमा कहिलेदेखि संलग्न हुनुहुन्छ ?
म एनआरएनएको अभियानमा संलग्न भएको सन् २००५ बाट एनसीसी अष्ट्रेलिया कमिटीबाट हो । केही समय सो कमिटीमा काम गरेँ । त्यसपछि एनसीसी अष्ट्रेलियाको निर्वाचित उपाध्यक्षको चुनाव जितेर काम गरेँ । अन्य सबै पदमा सर्वसम्मत भएपनि सदस्य र उपाध्यक्षको भने निर्वाचन नै भएको थियो र म पहिलो निर्वाचित उपाध्यक्ष हो । अनि त्यसपछि म वुमन डिपुटी कोअर्डिनेटर भएँ । त्यसपछि अर्को २ वर्ष पनि वुमन डिपुटी कोअर्डिनेटर भएर काम गरँे । यसपछि सचिवमा निर्वाचित भएँ । हाल चाहिँ म एनआरएनएको प्रवक्ताको रूपमा काम गरिरहेको छु । मेरो लगभग २००५ देखि २०१७ सम्मको लगातार एनसीसी हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको छु ।
पछिल्लो समय एनआरएनए धेरै सकृय भएन भन्ने भनाइ छ नि ?
देशको आवश्यकता अनुसार हामीले अभियान सञ्चालन गरेका छौं । हामी निष्कृय जस्तो बाहिर देखिए पनि विभिन्न अभियान र सहयोगका कार्यक्रममा सक्रिय हँुदै आइरहेका छौं । देशले हामीलाई माग गरेको अनुभूत गरेर आएका हौं । हाम्रो मुख्य परियोजना र सहयोग अभियान भनेको लाप्राक पुनर्निर्माण हो । लाप्राककै कुरा गर्दा सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्ने भएकाले समय लागे पनि भित्रभित्रै काम गरिरहेका थियांै । त्यो काम भइरहँदा पनि हामीले अलिअलि समाचार दिइरहेका थियांै र अहिले देशमा अर्को भवितव्य भयो । तराईमा बाढी तथा केही पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको समस्या भयो । यस घटनाका कारणले फेरि देशले विदेशमा रहेका नेपालीसँग सहयोगको अपेक्षा ग¥यो र फेरि पनि हामी अहिले सहयोगका लागि अभिप्रेरित भएका छौं । हामी सधैं सक्रिय रूपमा नै काम गर्दै आइरहेका छौं । देशमा भवितव्य हँुदा बढी सक्रिय हुने गरेका छौं । यो हुनु पनि पर्छ ।
एनआरएनएमा धेरै कम संख्यामा महिला सहभागी र सकृय भएको देखिन्छ । महिलाको सहभागिता कसरी बढाउनु पर्ला ?
विगत १२÷१४ वर्षदेखि एनआरएनएभित्र म महिलाको नेतृत्वमा रहेको छु । हामी महिला अभैm बाहिर आउन गाह्रो रहेको देखिन्छ । पहिलाको कुरा गर्ने हो भने म महिला महासचिव पदमा लडेको थिएँ । ठूला ठूला व्यक्ति पनि मलाई हराउन लाग्नुभयो । तर यस्तो परिस्थितिमा पनि मैले गर्व गरेँ, किनभने मलाई हराउन यति ठूला व्यक्ति लाग्नुहुन्छ भने म धेरै शक्तिशाली महिला रहेछु भन्ने लाग्यो । तर म जस्तो लड्छु भनेर आउन सक्ने लिडरसिपको विकास अभैm भइसकेको छैन । महिला अगाडि आउन आफ्नो क्षमता पनि विस्तार गर्नुपर्छ । तर अहिले एनसीसी र आईसीसीमा महिलाको सहभागिता कम भयो भनेर एनसीसी र आइसीसीमा महिलाको आवश्यकता छ भनेर वुमन फोरमको अवधारण ल्याएका छौं । महिलाको आवश्यकता महसुस गरेर रञ्जना उदासले आइसीसी महिला फोरमको स्थापना गर्नुभएको थियो । महिलाको सहभागिता जनाउन एनसीसी महिला फोरमको स्थापना अष्ट्रेलियाबाट मैले गरेको थिएँ । अहिले तपार्इंले नै हेर्नुभयो भने धेरै एनसीसीहरू महिलाले अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा लड्नुभएको छ । त्यो भनेको चाहिँ अहिले २÷४ वर्षको अवधिमा लिडरसिप विकास गरेका छौं र अब हामी केन्द्रमा पनि आउन खोजिरहेका छांै । तर पनि यसका लागि पुरुषको सहायता पनि चाहिने रहेछ । हामी जेन्डर ब्यालेन्समा जान खोज्छौं । तर हामीलाई जति सहयोग हुनुपर्ने हो, त्यति सहयोग मिलेको अनुभूत गरेको छैन ।
एनआरएनएमा पछिल्लो समय भिजन ट्वान्टी ट्वान्टी एन्ड वियोन्डको कुरामा केही विवाद देखियो, किन होला ?
विवाद हुनुको कारण अर्गनाइजेसन ठूलो पनि भयो । संख्या बढेपछि विचार बढ्छ । विचार बढेपछि सबै विचार मिल्छ भन्ने छैन । विचार नमिल्दा विवाद देखिएको हो । वास्तवमा त्यो विवाद होइन, छलफल हो भन्नुपर्छ । भिजन टे्वान्टी ट्वान्टी एन्ड वियोन्ड भन्यौं, यस्तै सरकारको पनि अहिले भिजन ट्वान्टी थर्टी भन्ने आइरहेको छ । एनआरएनए नेपालको विकास साझेदारका रुपमा अघि बढ्नुपर्छ । एनआरएनए भावना र धनीको मात्र संस्था हो भन्ने होइन । अब हामीले संस्थाभित्र एउटा सिस्टम ल्याउनुप¥यो । सिस्टम आएपछि हरेक व्यक्तिले अवसर पाओस् भन्ने हो । अब सबै काम अपरेसन लेभलमा होस् । यसको अवधारणा भनेको संस्थाको सेक्रेटेरियट लेबल बलियो बनाएर सबै क्षेत्रमा काम गर्ने भन्ने हो । यसरी नै एक्जुकेटिभ लेबलले चाहिँ सरकारसँग नीतिगत विषयमा काम गर्दा कार्य विभाजन पनि हुन्छ । कार्य विभाजन हुदा संस्थाको काम सिस्टममा जान्छ । सिस्टम नै छैन भन्न खोजेको होइन, अझ समयसापेक्ष सिस्टममा जानुपर्छ भन्ने हो । भिजन ट्वान्टी ट्वान्टी एन्ड वियोन्डले अझ संस्थागत बनाउनु प¥यो भन्ने हो ।
एनआरएनएलाई संस्थागत तथा प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न कस्तो नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
अब नेतृत्वलाई सबै पहिला संस्थागत बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई प्रष्ट रुपमा अगाडि ल्याउनुपर्छ । १४÷१५ वर्ष भावना भनेर हिँड्यांै । नेटवर्क पनि बनायौं । यसको नेटवर्क ठूलो भइसकेको छ । सबै एनआरएनलाई समेट्ने गरी नेतृत्व आउनुपर्छ । संस्थालाई संस्थागत कसरी बनाएर लैजाने भन्ने मुख्य कुरामा ध्यान दिने नेतृत्वको आवश्यकता छ । एनआरएन कसरी नेपालका लागि विकास सझेदार बन्न सक्छ भन्ने कुरामा जानुपर्छ ।
त्यसो भए हालका अध्यक्ष शेष घलेको भिजन बुझ्ने नेतृत्व चाहिन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
आफ्नो हातको ५ वटा औंला त एकै किसिमको छैन भने कुनै पनि व्यक्तिलाई यो जस्तो भनेर तुलना गर्न सकिँदैन । शेष घले जस्तो व्यक्तित्व पाउनु भनेको एनआरएनएको भाग्य नै हो भन्नुपर्छ । ४ वर्षको उहाँको नेतृत्वमा म बसेर काम गरँे । उहाँले संस्थाको इथिक तथा संस्थागत मान्यतामा धेरै जोड दिनुभयो । उहाँजस्तो को हुन्छ भन्दा कोही जस्तो कोही हँुदैन । सबैमा फरक फरक क्षमता हुन्छ । तर उहाँको विचारलाई अघि बढाउने कोही आउनुप¥यो । जसले उहाँले सुरु गरेको लाप्राक तथा अन्य काम पनि सकाउने प्रण गरोस् ।